झापामा यस्तो कहालीलाग्दो घटना ! २१ वर्षिया चेलीकाे पुछियो सिन्दुर, ३ वर्षको छोरीले ‘बाबा खै’ भन्दा मन थाम्न सक्दिनन् (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > समाचार > झापामा यस्तो कहालीलाग्दो घटना ! २१ वर्षिया चेलीकाे पुछियो सिन्दुर, ३ वर्षको छोरीले ‘बाबा खै’ भन्दा मन थाम्न सक्दिनन् (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । झापामा निकै नै कहालीलाग्दो घटना भएको छ । कन्काई नगरपालिका ३ मा कहालीलाग्दो घटना भएको हो । २१ वर्षको उमेरमै एक किशोरीको सिन्दुर पुछिएको छ भने सानी छोरी टुहुरी भएकी छन् । २३ वर्षका युवा अभिषेक चौधरीलाई उनकै साथीहरुले ज्यान लिएका छन् । २१ वर्षको उमेरमै सिन्दुर बनेकी युवतीको ३ वर्षकी सानी छोरी छन् । झापा सुरुगाँमा साथीहरुले नै ज्यान लिएपछि अहिले उनको घरमा शोक छाएको छ ।
घटना भएको अघिल्लो दिन साथीसंग हाँसिखुसी घरवाट निस्केका थिए । उनी कामवाट फर्केर आएपछि उनले नै चलाउने साइकल लिएर अभिषेक एक जना साथीसंगै गएका थिए । खाना पकाएर सकेपछि पनि श्रीमान घर नआएपछि उनले फोन गर्दा फोन पनि लागेन । त्यसपछि उनी खोज्न निस्किइन् राती ११ वजे सम्म पनि उनी फेला परेनन् ।
तर भोलीपल्ट आफ्नो श्रीमानको निधन भएको आफुले थाहा पाएको बताइन् । भोलीपल्ट त्यो साथी घरका सबै परिवारलाई सखाप पार्ने उद्देश्यले आएको आफुले थाहा पाएको बताइन् । उसले त्यस्तो भनेको रहेछ, भोलीपल्ट थाहा पाएपछि मलाई निकै डर लाग्यो । राती पानी खान मागेको बेलामा ढोका खोलेको भए सबैलाई सक्ने रहेछ ।
भोजपुरमा घ’ट्यो वि’भत्स घ’टना, खोलामा कपडा धोइरहेकी महिलाका दुवै स्त’न का’टेर भाग्यो !